Top 6 barnaamijyadooda antivirus lacag la'aan ah Windows Phone
Waxaan had iyo goor lagu wargeliyay in furin khatar ah in kumbiyuutarada our, ka qaateen la qaadi karo, taleefannada gacanta, iyo murriyado. Wararka maalin kasta oo aynu og nahay inaynu leennahay Fadliga in ay ku adkaysato in ka badan. Under dallada barnaamijyadooda caayi aad aragto doonaa tiro balaadhan oo ah nasties iska gaashaan, oo ay ku jiraan cudurada, Trojans, adware, waaweyn, kolkaasaa dirxi galay, apparatuses logu, iyo spyware.
Dhab ahaantii waxaan Ma jecli taas maqleen, weli xaqiiqada dhabta ah waxay tahay in aad qabto kala hadli doona codsigaaga ammaanka gaaray sida clockwork, sanadkii hal mar ku dhacdo kasta. Waxaa joogto noqday qulqulka furin cusub oo muujinaysa ammaanka waa dagaal joogto ah. On fursad off in aad baari AV-Imtixaanka sheegay bilaha iyo sannadaha aad Arkaa doonaa qadarka isbedel jiro meesha ugu sarreysa ee jaantuska barnaamijyada ammaanka. Sababtoo ah codsigaaga waa weyn yahay haatan, micnaheedu ma aha, wuu hayn doonaa on siiyo baaxadda ugu fiican ka dib on.
1. NetQin Mobile-adda
2. Airscanner Mobile-adda 3.0
3. Norton casriga Security
5. fiirsasho Mobile Security Wixii Windows Mobile
6. Badbaadada Qoyska Avg (Free)
Rating : 3.5 xiddigaha on softonic
NQ Mobile Security hubisaa ka hortagga khatarta mobile, oo ay ku jiraan furin, tuugada, iyo cudurada, halka dammaanad qalabka aad u sii socda ee xawaare fiican. Our mid ka mid ah waxyaabaha uu ka kooban nooc u Windows Phone daraan cadowga ku ah jeegga cudurka, dhirta shakhsi, baadhi ammaan ah, iyo qalab gurmad u xiriirada aad ah. By qaadanaya dhawr daqiiqadood ka soo bixi NQ Mobile Security, waxaad si buuxda u gaashaan kartaa naftaada iyo qoyskaaga ka barnaamijyo iyo dambiilayaasha kale ee digital.
NetQin Mobile Anti-virus waa freeware ah loogu tala galay si loo hubiyo in Windows Mobile ka dhanka weerarada cudurka, Trojans, spyware, furin.
NetQin Mobile Anti-virus siinayaa yaqiinin joogto ah oo isticmaala database infakshan waxaa had iyo jeer hagaajiyo.
NetQin Mobile Anti-Virus siinayaa awood ah sida xoojinta iyo dib u soo celineysa xiriirada iyo maamulka deegaanka ah oo telefoon lumay ama la xaday.
Iyada oo la heli karo ballaariyeen fog oo PDAs iyo casriga ah yimaado oo khatar ku ah balaariyay ka weerarada cudurka. Save the lacag caddaan ah, waqtiga, iyo macluumaad ay ammaanka jeebkaaga PC la taaban karo hadda la Airscanner ™ Mobile
Qaybaha Airscanner Mobile antivirus 'waxaa ka mid ah:
• Automatic, fudud, redesigns online saxiixyada virus iyo motor hubinta • Fast, hagaagtay heerka hubinta in aragtida patent-abuurka la sugayo.
• Taageerada PocketPC 2003 / Windows Mobile 2003.
• Karantiinka ama baabbi'in cudurada ku rakiban iyo furin.
• Fast, hormartay hubinta xawaare iftiinka patent-abuurka la sugayo.
• Automatic, casriyaynta online saxiixyada virus iyo engine iskaanka.
• Easy overhauls online.
• cudurada xasuusta dhexda dhismuhu la qalab ah shaacinta habka laga gano.
• Debug qoriga hacks la diiwaan fudud siladda ah ka-faa'iideysan.
• Timaha diido weerar adeeg la nidaamka analyzer degdeg ah.
• Waxaad ku qortaa gaar saxiixa virus caado u gaar ah (khaas).
• Qabtaan deg deg ah, recursive, iyo adaptably multithreaded jeegga filesystem.
Airscanner ee Mobile-adda waa, ammaanka fog gaaray xal u daran ee aad mobile daaqadaha.
Price : free, ma dukaanka daaqadaha rating, 4 xiddigood rating softonic
Tan iyo markii ay qadar weyn oo naga mid ah accesed internetka iyada oo PDAs ama taleefoonka, ma ahan wax lama filaan ah in halista ah ee cudurada iyo hacks on qalabka mobile ayaa la ballaariyey. Sidoo kale, ma ahan wax lama filaan ah in antivirus barnaamijyadooda samaynta waxaa loo digay na in la hubiyaa ka dhanka weerarada mobile.
Norton casriga Security yahay waxa laga yaabaa in sidoo kale waxaa loogu yeedhi utility caymiska PC caan iska horimaad hubeysan ee. Tani waxaana suura gal Windows Mobile siinayaa yaqiinin joogto ah ka yahay khataro nidaamka iyo channel spam ah SMS in ay ku siinaysaa fursad ah in laga takhaluso fariimaha loo baahnayn, iyada oo isticmaalka oo qaadacay iyo whitelists aad.
Qaabka loo xirxiro u Norton casriga Security waa yara adag tahay, si kastaba ha ahaatee mar nidaamka waxa ay bixisaa hab wax ku ool ah oo dhibaato la'aan u ah hubinta in aad qalab. Qoqobyada-adda lagu hagaajin karo in auto-ilaaliso casriga ah, iyo in lagu siiyo awoodda ay u qabtaan jeeg scan cudurka iyo taariikheed ee dhamaystiran ee interims horena. Choices daraan awoodda si ay u qabtaan hawlo barnaamijkii marka infakshan waa distinguished (Keliya gal, dadka gaalow ku Access, Delete, ama Karantiinka), oofiyo casriyaynta caadiga ah iyada oo LiveUpdate, iyo diyaarin dhex-.
Taana, qayb brannmur in Norton casriga Ammaanka, ku taalaa interface gebi Gooni goobta antivirus, si aad u baahan tahay in ay xirto mid ka mid tahay in la beddelo ku xiga. Qaabka brannmur waa dhab ahaantii wax ku ool ah si kastaba ha ahaatee, oo waxaa jira afar heer ammaanka kala duwan waxaad ka eegi kartaa in ka badan (Trust No One, khayaano, taxaddar ku jiro, ama Trust oo dhan).
Iyada oo wax walba xisaabta lagu darsado, Norton casriga Security bixiyaa hab faa'iidada iyo wax soo saar leh, waayo ilaa hadda hayo, alaabtii cabsado aad qalab mobile.
p Waxay leedahay ma dukaamada daaqadaha rating, 4 xiddigood softonic user rating
MobiShield Mobile Security hubisaa telefoonka gacanta ka dhanka ah furin iyo spyware. Hel free MobiShield-adda.
Anti - Virus: Sawirka, la aqoonsado oo dila furin, spyware, iyo qoriga, Scan Memory Support, taageero buuxda howlgal, Scan Support Quick, Taageer ammaanka Real jeer.
Taageerada : Windows Mobile 5.0 / 6.0 / 6.1 / 6.5
No dukaanka daaqadaha rating laakiin 3.5 user rating softonic
Fiirsasho Mobile Security waa codsi ah oo lacag la'aan ah ka kooban by fiirsasho, Inc. forWindows Mobile xajiya telefoonka ka mid ah ayaa mobile ilaaliyo iyo aamin waqtiyada oo dhan. Codsigan waxaa ku jira waxtarka Adda iyo Amniga ah in gaashaan oo telefoonka ka mid ah ayaa mobile ka cudurada, spyware iyo furin. Waxaa sidaas awgeed Sifeeyaha codsi kasta oo lagala soo bixi in ay hubiyaan in ay tahay iyada oo aan cudurka. Waxaa sidaas oo kale ay muujineysaa updates automatic.
Habase yeeshee amniga oo anti-virus, fiirsasho Mobile Security muujineysaa aBackup iyo faaiidada in macaamiisha ku xoojiya sidii ay xiriir gurmad oo la helay karaa in at myLookout.com soo celi. Macaamiisha sidaas oo soo celin kara macluumaad si telefoon kasta oo hadda si degdeg ah oo effortlessly.
Ka sokow, codsigan ayaa feature Anti-xatooyo ah in awood macaamiisha in la ogaado ay telefoonka la soo xaday ama lumay isticmaalka GPS telefoonka ee. Macaamiisha dhigay karaa digniin ah (wabatay), Xiran iyo ogolaan in macluumaadka telefoonka oo dhan meel fog laga goolka dhamaadka gaar ah si aad u ogaado.
Guud ahaan, u fiirsasho Mobile Amniga waa wax ku ool ah oo dabiici ah Windows Mobileapplication in la damaanad qaado ka mid ah ayaa mobile amaan iyo kalsooni mar walba.
No dukaanka daaqadaha rating
Barnaamijkan ilaaliyo waa fursad waalidku ay gacanta ku kala duwan u Internet Explorer. Waxaa si gaar ah loogu tala galay in Square dalal maal aan habboonayn ama loo caayi doonaa, oo markii faa'iideysan oo qayb ka ah lala Avg Qoyska Safety PC, waxay kuu ogolaanaysaa dadka waawayn dhigay qabanqaabada ee degaanada la ogol yahay oo hor istaagay, baaraan dhaqdhaqaaqa online ah macaamiisha kala duwan oo ku saabsan qalabka, iyo piece dheer kala duwan oo dalal xidhiidhka dhexdooda iyada oo la tixgelinayo magacyo gaarka ah ee tyke kasta.
Badbaadada Qoyska Avg yahay, Browser xor ah oo xasilisay qoyska-jaan Web, oo aad iyo aad u da'da yar oo gaashaan oo ka: • Meelaha aan haboonayn • tricks Online • degaanada Musuqmaasuqa • phishing • Ku Imaan Karta malignant • walax Sites in isku dayaan in ay ku xadgudbaan xogta shakhsiga.
> Resource > Windows > Top 6 Free adda Apps for Windows Phone